Post byဘင်္ဂလုရု၊ အိန္ဒိယ on Friday, February 02,2018
ဓာတ်ပုံ-Delta Farm Press
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆန်တင်ပို့မှု အများဆုံးဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဆန်ဈေးဟာ ပြည်ပကနေ ၀ယ်လိုအား များပြားလွန်းနေပြီး ပြည်တွင်းမှာ ဆန်အ၀င်နည်းနေတာကြောင့် ရူပီးဈေးတွေ ကောင်းနေတဲ့ကြားမှာပဲ ခြောက်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာ အမြင့်ဆုံးဈေးအထိ တက်သွားခဲ့ပါတယ်။
“အာရှနဲ့ အာဖရိက ၀ယ်လက်တွေကနေ ဆန်ဝယ်ဖို့ မေးမြန်းတာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိမှာ ဆန်အ၀င်ကနည်းနေတယ်။ ရူပီးဈေးတက်တာကြောင့်လည်း ဆန်ဈေးတွေက လိုက်တက်နေတယ်” လုိ့ အန်ဒရာ ပရာဒက်ရ်ှက ဆန်ကုန်သည်တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
အိန္ဒိယရဲ့ ငါးမှတ်ဆန်တစ်တန်ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဒေါ်လာတက်သွားတဲ့အတွက် တစ်တန်ကို ၄၄၇ဒေါ်လာကနေ ၄၅၁ ဒေါ်လာအထိရှိနေပါတယ်။ ဒါဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကစလို လေးနှစ်အတွင်းမှာ အမြင့်ဆုံးတက်သွားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ရူပီးဈေးဟာလည်း ၃၂ လအတွင်းမှာ အမြင့်ဆုံးအထိ တက်နေတာကြောင့် ဆန်ဈေး တက်ပေမယ့် ကုန်သည်တွေအတွက် သိပ်မကျန်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ဆန်တင်ပို့မှုဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ပမာဏအားဖြင့် တန်ချိန် ၁၂ဒသမ၃ သန်း ရှိတင်ပို့နိုင်ခဲပါတယ်။ ဒါဟာလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်က အ၀ယ်လိုက် လာတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ုနိုင်ငံဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ရေကြီးလို သီးနှံတွေ ပျက်စီးခဲ့တဲ့ အတွက် ဆန်တွေ အများအပြား တင်သွင်းနေရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့ကတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဟာ ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ဆန်တန်ချိန် တစ်သိန်းခွဲ တင်သွင်းမယ့် အစီအစဉ်ကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီလို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရဲ့ ဆန်ဝယ်ယူရေးဌာနအ ကြီးအကဲက ပြောပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ဆန်တန်ချိန် တစ်သိန်းကို တစ်တန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၆၅ ဒေါ်လာနဲ့ ၀ယ်ယူဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလက သဘောတူထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ ငါးမှတ်ဆန်တစ်တန်ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၄၃ ကနေ ၄၄၆ ဒေါ်လာရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၄၀ကနေ ၄၄၈ ဒေါ်လာပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဆန်တင်ပို့သူများအသင်းကတော့ ဆန်တင်ပို့မှုကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဘတ်ငွေ ဈေးတက်နေ တာတွေကို ထိန်းညှိပေးဖို့ အစိုးရကို တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ဘတ်ငွေဈေး ဟာ လေးနှစ်အတွင်းမှာ အမြင့်ဆုံးတက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘတ်ငွေဈေးတက်ရင် အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်တင်ပို့နေတဲ့ ဆန်ဈေးကိုလည်း မြှင့်ရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ဘတ်ငွေဈေးတက်မှာကို ကုန်သည်တွေက စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာ့ ဆန်ဈေးကွက်မှာ ထိုင်းဆန်တွေရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
“အကုန်လုံးက ငွေလဲလှယ်နှုန်းအပေါ်မှာ မှီခိုနေတယ်။ ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေဆို ငြိမ်နေတယ်။ ကျွန်တော့်ဖောက်သည်တွေက ထိုင်းဆန်ဈေးက အရမ်းကြီးလွန်းတယ်လို့ ပြောကြ တယ်"လို့ ဘန်ကောက် အခြေစိုက် ကုန်သည်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာတော့ ဆန်လက်ကျန်ကုန်နေတဲ့အတွက် ငါးမှတ်ဆန်ဈေးနှုန်းဟာ တစ်တန်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၄၀ ကနေ ၄၅၀ အထိ ရှိနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က တစ်တန်ကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၅၀ ၀န်းကျင်ရှိခဲ့တာတောင် အဲဒီဈေးဟာ သုံးနှစ်အတွင်း အမြင့်ဆုံးဈေးဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်သည်တွေကတော့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ၀ယ်လက်တွေကို ရောင်းချဖို့ ဆန်လုံလုံလောက် လောက်ရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အပါအ၀င် နိုင်ငံလေး နိုင်ငံကနေ ဆန်တန်ချိန် ၃၄၆၀၀၀ ၀ယ်ယူတင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆန်တွေ အသစ်ဝင်လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ရင်တော့ ဆန်ဈေးတွေ ကျလိမ့်မယ်လို့ ကုန်သည် တွေက မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
“ဆန်ဈေးတွေ ကျနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာလည်း အဲဒီအချိန်မှာ ၀ယ်လိုအားအပေါ် မူတည်တယ်” လို့ ဟိုချီမင်း အခြေစိုက် ကုန်သည်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
တခြားကုန်သည်တစ်ဦးကတော့ အခုလက်ရှိမှာ စပါးစိုက်ဧကပေါင်း ၃၇၀၆၀၀ကို ရိတ်သိမ်းပြီးပြီဖြစ် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီပမာဏဟာ နိုင်ငံရဲ့ စပါးစိုက်ဧက ၁ ဒသမ ၆၅ သန်းနဲ့ ယှဉ်လိုက်နည်း အနည်းငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်။
ကမ်ဘာပျေါမှာ ဆနျတငျပို့မှု အမြားဆုံးဖွဈတဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ဆနျစြေးဟာ ပွညျပကနေ ၀ယျလိုအား မြားပွားလှနျးနပွေီး ပွညျတှငျးမှာ ဆနျအဝငျနညျးနတောကွောငျ့ ရူပီးစြေးတှေ ကောငျးနတေဲ့ကွားမှာပဲ ခွောကျနှဈခှဲအတှငျးမှာ အမွငျ့ဆုံးစြေးအထိ တကျသှားခဲ့ပါတယျ။
“အာရှနဲ့ အာဖရိက ၀ယျလကျတှကေနေ ဆနျဝယျဖို့ မေးမွနျးတာတှရှေိတယျ။ ဒါပမေယျ့ လကျရှိမှာ ဆနျအဝငျကနညျးနတေယျ။ ရူပီးစြေးတကျတာကွောငျ့လညျး ဆနျစြေးတှကေ လိုကျတကျနတေယျ” လို့ အနျဒရာ ပရာဒကျရျှက ဆနျကုနျသညျတဈဦးက ဆိုပါတယျ။
အိန်ဒိယရဲ့ ငါးမှတျဆနျတဈတနျဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၃ ဒျေါလာတကျသှားတဲ့အတှကျ တဈတနျကို ၄၄၇ဒျေါလာကနေ ၄၅၁ ဒျေါလာအထိရှိနပေါတယျ။ ဒါဟာ ၂၀၁၁ ခုနှဈကစလို လေးနှဈအတှငျးမှာ အမွငျ့ဆုံးတကျသှားတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ ရူပီးစြေးဟာလညျး ၃၂ လအတှငျးမှာ အမွငျ့ဆုံးအထိ တကျနတောကွောငျ့ ဆနျစြေး တကျပမေယျ့ ကုနျသညျတှအေတှကျ သိပျမကနျြဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ ဆနျတငျပို့မှုဟာ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ ၂၂ ရာခိုငျနှုနျးအထိမွငျ့တကျခဲ့ပွီး ပမာဏအားဖွငျ့ တနျခြိနျ ၁၂ဒသမ၃ သနျး ရှိတငျပို့နိုငျခဲပါတယျ။ ဒါဟာလညျး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံဘကျက အဝယျလိုကျ လာတဲ့အတှကျ ဖွဈပါတယျ။ ဘင်ျဂလားဒရှေျု့နိုငျငံဟာ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက ရကွေီးလို သီးနှံတှေ ပကျြစီးခဲ့တဲ့ အတှကျ ဆနျတှေ အမြားအပွား တငျသှငျးနရေပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ကွာသပတေးနကေ့တော့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံဟာ ထိုငျးနိုငျငံကနေ ဆနျတနျခြိနျ တဈသိနျးခှဲ တငျသှငျးမယျ့ အစီအစဉျကို ပယျဖကျြလိုကျပွီလို့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံရဲ့ ဆနျဝယျယူရေးဌာနအ ကွီးအကဲက ပွောပါတယျ။ ထိုငျးနိုငျငံကနေ ဆနျတနျခြိနျ တဈသိနျးကို တဈတနျ အမရေိကနျဒျေါလာ ၄၆၅ ဒျေါလာနဲ့ ၀ယျယူဖို့ ပွီးခဲ့တဲ့အောကျတိုဘာလက သဘောတူထားပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံမှာတော့ ငါးမှတျဆနျတဈတနျဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၄၄၃ ကနေ ၄၄၆ ဒျေါလာရှိပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့အပတျကတော့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၄၄၀ကနေ ၄၄၈ ဒျေါလာပဲ ရှိခဲ့ပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ ဆနျတငျပို့သူမြားအသငျးကတော့ ဆနျတငျပို့မှုကို ကာကှယျဖို့အတှကျ ဘတျငှေ စြေးတကျနေ တာတှကေို ထိနျးညှိပေးဖို့ အစိုးရကို တိုကျတှနျးထားပါတယျ။ ဘတျငှစြေေး ဟာ လေးနှဈအတှငျးမှာ အမွငျ့ဆုံးတကျနတောလညျးဖွဈပါတယျ။
ဘတျငှစြေေးတကျရငျ အမရေိကနျဒျေါလာနဲ့ တနျဖိုးဖွတျတငျပို့နတေဲ့ ဆနျစြေးကိုလညျး မွှငျ့ရမှာ ဖွဈတာကွောငျ့ ဘတျငှစြေေးတကျမှာကို ကုနျသညျတှကေ စိုးရိမျနကွေပါတယျ။ ပွီးတော့ ကမ်ဘာ့ ဆနျစြေးကှကျမှာ ထိုငျးဆနျတှရေဲ့ ယှဉျပွိုငျနိုငျစှမျးကို ထိခိုကျမှာ စိုးရိမျနကွေပါတယျ။
“အကုနျလုံးက ငှလေဲလှယျနှုနျးအပျေါမှာ မှီခိုနတေယျ။ ကြှနျတျောလုပျငနျးတှဆေို ငွိမျနတေယျ။ ကြှနျတေျာ့ဖောကျသညျတှကေ ထိုငျးဆနျစြေးက အရမျးကွီးလှနျးတယျလို့ ပွောကွ တယျ"လို့ ဘနျကောကျ အခွစေိုကျ ကုနျသညျတဈဦးက ပွောပါတယျ။
ဗီယကျနမျနိုငျငံမှာတော့ ဆနျလကျကနျြကုနျနတေဲ့အတှကျ ငါးမှတျဆနျစြေးနှုနျးဟာ တဈတနျကို အမရေိကနျဒျေါလာ ၄၄၀ ကနေ ၄၅၀ အထိ ရှိနပေါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့အပတျက တဈတနျကို အမရေိကနျ ဒျေါလာ ၄၅၀ ၀နျးကငျြရှိခဲ့တာတောငျ အဲဒီစြေးဟာ သုံးနှဈအတှငျး အမွငျ့ဆုံးစြေးဖွဈပါတယျ။
ကုနျသညျတှကေတော့ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံက ၀ယျလကျတှကေို ရောငျးခဖြို့ ဆနျလုံလုံလောကျ လောကျရှိတယျလို့ပွောကွပါတယျ။ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံဟာ ဗီယကျနမျနိုငျငံ အပါအဝငျ နိုငျငံလေး နိုငျငံကနေ ဆနျတနျခြိနျ ၃၄၆၀၀၀ ၀ယျယူတငျသှငျးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ဆနျတှေ အသဈဝငျလာမယျ့ ဖဖေျောဝါရီလကုနျရငျတော့ ဆနျစြေးတှေ ကလြိမျ့မယျလို့ ကုနျသညျ တှကေ မြှျောလငျ့နကွေပါတယျ။
“ဆနျစြေးတှေ ကနြိုငျတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါဟာလညျး အဲဒီအခြိနျမှာ ၀ယျလိုအားအပျေါ မူတညျတယျ” လို့ ဟိုခြီမငျး အခွစေိုကျ ကုနျသညျတဈဦးက ပွောပါတယျ။
တခွားကုနျသညျတဈဦးကတော့ အခုလကျရှိမှာ စပါးစိုကျဧကပေါငျး ၃၇၀၆၀၀ကို ရိတျသိမျးပွီးပွီဖွဈ တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အဲဒီပမာဏဟာ နိုငျငံရဲ့ စပါးစိုကျဧက ၁ ဒသမ ၆၅ သနျးနဲ့ ယှဉျလိုကျနညျး အနညျးငယျပဲရှိပါသေးတယျ။
My wife and i have been now happy when Emmanuel managed to finish up his studies through the entire precious recommendations he made through the web pages. It's not at all simplistic to just continually be giving out tips and hints which often people today might have been trying to sell. And we also do know we've got the blog owner to appreciate for that. All the explanations you made, the straightforward website navigation, the friendships your site help to foster - it is everything terrific, and it's helping our son in addition to us reason why the content is cool, and that is pretty mandatory. Thanks for everything!
by http://www.adidasnmds.us.com at May 19 2019
My wife and i were now ecstatic that Emmanuel managed to finish off his researching by way of the precious recommendations he came across while using the blog. It's not at all simplistic to just happen to be makingagift of information which usually many others may have been selling. And now we understand we need you to thank because of that. The specific illustrations you've made, the easy website menu, the relationships you help to instill - it is all powerful, and it's really leading our son in addition to the family reason why that situation is entertaining, which is certainly seriously vital. Many thanks for the whole thing!
by http://youl.ink/yzyboost at May 15 2019
Needed to draft youavery small word to thank you so much the moment again for the fantastic views you've contributed in this case. It has been really open-handed with you to offer unreservedly just what numerous people would've sold as an ebook to generate some profit for themselves, primarily seeing that you might have tried it in the event you wanted. The guidelines as well acted to becomeagood way to be certain that the rest haveasimilar desire really like my personal own to grasp much more when considering this condition. I'm sure there are some more enjoyable instances in the future for individuals who read your blog post.
by http://www.yeezy-boost350.us.com at May 14 2019
I'm also writing to make you know of the remarkable encounter my child found using the blog. She realized suchalot of things, which included what it's like to possessagreat coaching style to get many more clearly fully understand some tortuous subject areas. You really exceeded visitors' expectations. I appreciate you for producing those great, trusted, educational and in addition cool tips on your topic to Sandra.
by http://www.offwhitehoodie.us.com at May 10 2019
I needed to put you one little bit of note in order to thank you very much the moment again on the pretty opinions you have contributed at this time. It's tremendously open-handed with you to provide without restraint what exactly many people might have distributed as an ebook to make some profit for themselves, precisely considering that you could have tried it if you ever wanted. The tips likewise worked to become fantastic way to be certain that other people have the identical desire similar to mine to find outawhole lot more in respect of this problem. Certainly there are some more pleasant periods up front for many who looked over your website.
by http://www.adidasgazelle.us.com at May 06 2019